Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley waa Dambiile uu Gumaysiga u Bogay siduu u Jilo Riwaayadda
Cabdi Iley waa Dambiile uu Gumaysiga u Bogay siduu u Jilo Riwaayadda
Waxaan kusoo gunaanadaynaa taxanihii ku saabsanaa Riwaayadaha uu gumaysiga soo alifo iyo kuwa u jila, in aan tusaale yar ka bixino riwaayadaha sida gaarka ah loogu alifo Cabdi iley oon ku sheegnay inuu gumaysiga u bogay siduu u jilo riwaayadaha, isla markaana uu karti dheeraaday kuwii ka horeeyay uu ku muujiyay inuu u qaban karo gumaysiga waxay ka daaleen jeneraaladiisii. Waana midda uu ku mutaystay inuu noqdo dabadhilifkii mudada ugu badan uga adeegay gumaysiga gudaha Ogadenya laga soo bilaabo Minilik ilaa Deseleen. Ma aha arin taariikhda ku cusub inuu ku dhiirado baabi’inta shacabka dabadhilif uu gumaysiga kusoo xushay tilmaamihii aan horey usoo sheegnay ee sadexda ahaa sida in laga keeno qaybaha ugu hooseeya bulshada -dhaqaale ama dhaqan ahaan- shaqsi ay kalsooni darro hayso iyo liidanaan (inferiority complex), oo u cadhaysan bulshaduu la noolaa oo doonayan in awooda la siiyo u adeegsado aargoosi naxariisdara ah. Waxaa kaloo aan taariikhda ku cusbayn in dhibaatada faraha badan ee loo gaysanayo shucuubta halgamaysa aanay ka horjoogsanin guusha inkastoo laga yaabo inay mudada halganka dheereyso.
Xusuusintaa kooban hadaan ka gudubno, Cabdi Iley oon ku sheegnay inuu gumaysiga u bogay habkuu u jilayo riwaayadaha loo alifo, waxaan qaybtan kusoo qaadan doonaa dambiyada loo qorsheeyay inuu fuliyo Cabdi Iley iyo qur-qurxinta (cosmetics) uu gumaysiga ugu talagalay fanaankiisa weyn ee Cabdi iley si riwaayadaha dambee uu jilayo u noqdaan kuwo la daawan karo. Gumaysiga qofka uu adeegsanayo wuxuu u galiyaa shaarar kala duwan oo astura suu shacabka uga gado inay ku jirto maslaxadooda. Haduu shacabkaasi yahay mid diinta qiimeeya wuxuu xidhan shaadh culimo, ka dibna wuxuu kasoo horjeedsan gumaysiga ilaa muddo ay isla ogyihiin isaga iyo gumaysiga si markuu soo xaroodo oo uu bilaabo u adeega muuqda aan loo odhan waligiiba wuxuu ahaa daba dhilif. Haduu yahay shacab qeemeeya xoriyadda iyo cadaaladda waxaa dhacda inuu gumaysiga dhowr jeer u xidho gadood uu kaga soo horjeedo gumaysiga iyo cadaalad daradiisa, ama looga soo qabto siaabo kala duwan goobaha dagaalka ka dibna xabsiga la dhigo oo lagu sawiro isagoo bahdalan hasa ahaatee diidan wixii laga doonayay si shacabka ula tacaadufo ka dibna u dabagalo isaga.
Ugu horeyn, arinta Cabdi iley way ka duwan tahay siyaabahaa aan tilmaanay inuu gumaysiga jawaasiistiisa qarsoon ugusoo dhex darsado shacabka halgamaya, sababtoo ah Cabdi iley isagaa doontay inuu gumaysiga u adeego ka dibna u fuliyay gumaysiga xadgudubyo iyo xasuuq loo gaystay shacabka oo aan horey uga dhicin Ogadenya. Waxaa ka mid ahaa qorshaha la siiyay Cabdi iley inuu fuliyo barnaamij uu dajiyay dhiigyacabkii bakhtiyay ee Meles Zenawi. Qorshahaa oo ahaa in laga qarxiyo Ogadenya dagaalo sokeeye oo qabiil u dagaalan ah si N/huraha CWXO uu ugu dhex milmo dagaaladaa uuna laayo ama difaaco bahdiisa. Suu u fuliyo qorshahaa wuxuu ku dhaqaaqay Cabdi iley oo uu ka fuliyay meela kala duwan oo Ogadenya ah dambiyo lala yaabay oon horey uga dhicin dalka. Dilal qorshaysan oo ula kac ah ayaa lagu fuliyay odayaal iyo dhalinyaro, waxaa laga dhacay xoolo iyo hanta kale goobo la qorsheeyay, waxaa lagu kufsaday meela kala duwan oo dalka ka mid ah haweenkii la xurmayn jiray, waxaa si aan aan aabayaeel lahayn loo xidhay dadweyne aan waxba galabsan oo qaarkood lagu waayay ama ay ku naafoobeen. Dambiyadaa iyo dhaqan xumadaa uu fuliyay Cabdi iley wuxuu ula jeeday inuu dagaal qabiil oo lagu hoobto ka qarxiyo Ogadenya si Itobiya caalamka uga dhaadhiciso inuusan ahyn dagaal gobanimadoone uu yahay dagaal qabiil oo laba hogamiye kooxeed ay ku dagaalamayaan jagada Kililka. Waxaa meela badan uu kaga hadlay KT Meles Zinawi oon horey u sheegnay inuu ahaa siyaasi dhiigyacab ah oo khatar ah, in dagaalada ka socda Ogadenya uu la mid yahay kuwa Somaliya ka socda oo Somalidu aanay ahayn dad leh mabda’ iyo falsafad dhaafsan qabiilkiisa. Sidaa darted ayuu Cabdi iley u siiyay Meles Zenawi qorshahaa aan sheegnay ee ah inuu dagaal qabiil ka qarxiyo Ogadenya wax kastoo ku baxaba (at any cost). Hadal iyo dhamaan, qorhshaasi wuu fashilmay, inkastoo Cabdi iley iyo kuwa la taliya ee huwan shaadhka qabiil ay reera badan u halaaeen arintaa darted. Si shacabka loo ilowsiiyo dambiyadii laga galay, waxaa loo dhiibay Cabdi iley Riwaayada cusub oo loogu talagalay in kaarkiisa kor loogu qaado. Riwaayadahaa oo saldhigiisu yahay;
Cabdi Iley waa geesi.
Cabdi iley wuxuu ilaalinayaa …
R/wasaaraha Itobiya isagaa ka awood badan ..
Shacabka Ogadenya iyo guud ahaan Somalida oo ah shacab noloshooda iyo dhaqankooda uu ku dhisan yahay ree-guuraanimo (nomadic) waxay leeyihiin siyaabo ka duwan kuwa shucuubta dagan ama ree magaalka ah oy ku qiimeeyaan qofka; haduu yahay madax iyo haduu yahay shaqsi caadi ahba.
Dabeecadaha ree-guuraaga ee Itobiya ay ku salayso qorshayaasha ay doonayso inay dabadhilifyada uu Cabdi iley ugu horeeyo ugu soo dhexdarto bulshada oy unoqdaan kuwa hogaanka u qabta ayaan qaybaha dambe kaga faaloon doonaa.
La socda qaybaha dambe.